တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Android ဖုန်းတွေအတွက် teamviewer
Android ဖုန်းတွေအတွက် teamviewer
Android ဖုန်းတွေအတွက် teamviewer ပါ။ 2. 10. 2013 ရက်နေ့ ကမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ apk လေးပါ။ ကွန်ပျူတာ မှာဆိုရင်တော့team viewer ကနာမည်ကြီးပါ။
team viewer ကိုသုံးပြီးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စက်ထဲကိုဝင်ကြည့် လို့ ရသလို ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ပေးလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခု android ဖုန်းတွေအတွက် အသုံးပြုလို့ ရမဲ့ apk လေးတွေ့ လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အသုံးပြုနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်
မိမိ ဝင်ရောက်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ID နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့် ပေးပြီးဝင်ရောက်လိုက်ရုံပါပဲ အားလုံးပဲဆောင်ထားသင့် ပါတယ်ခင်ဗျာ။play store ဝင်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူများလည်းဒေါင်းလုပ်ယူလို့ လည်းရအောင်ဖန်တီးထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by အောင်မျိုး at 7:26 PM